Imise tikidh ayey heshay kooxda Liverpool Final-ka Champions League, meeqa lacag ah ayeyna iibinaysaa?? – Gool FM
Imise tikidh ayey heshay kooxda Liverpool Final-ka Champions League, meeqa lacag ah ayeyna iibinaysaa??
(Liverpool) 10 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa in loo gacan geliyey oo ay heshay 16,613 tikidh kulanka Final-ka Champions League.
Tikidhadan waxa ay kaga qeyb gali doonaan kulanka ay Tottenham kula ciyaari doonaan garoonka kooxda Atletico Madrid ee Final-ka Champions League.
Kama dambeysta koobka horyaallada Yurub ee Champions League ayaa ka dhici doona garoonka qaadkiisu yahay 67,830 ee Estadio Metropolitano, iyadoo kulankan oo u dhexeeya kooxda reer England uu dhici doono Maalin Sabti ah oo ay Taariikhdu ku beegan tahay 01 bisha June ee soo aaddan.
Liverpool ayaa ku dhawaaqay in tikidhada qiimaha sare la iibinayo 513 gini, halka kuwa qiimaha hoose la iibinayo 60 gini.
Haddii si kale aan u dhigno Liverpool waxay shaacisay in Tikidhada ugu qaalisan ay ku kici doonaan 513 Pound, halka 3,200 afartii Tikidh lagu heli karo 60 Pound.
Reds ayaa sanadkii labaad oo xiriir ah gaartay Final-ka Champions League kaddib markii ay guul soo laabasho cajiib ah garoonkeeda Anfield kaga gaartay Barcelona Talaadadii, iyadoo la xusuusto in kooxda reer Spain ee Barca ay 3-0 kaga soo badisay Liverpool lugtii hore ee afar dhammaadka Champions League.
Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Chelsea xalay rigooreyaasha ku gaartay Final-ka Europa League